Wararka - Gu’ga ayaa imanaya, waa wakhti lagu raaxeysto!
Dhammaan la-hawlgalayaasha shirkadda ayaa ku soo ururay isgoyska wadada jianhua iyo wadada labaad ee woqooyi. Wadadeena Baaskiil wadista waxay ahayd dhibic uruurinta-qaadashada wejiga Hutuo River-Zhengding South Gate-Raad-raac tallaabooyinkeenna iyadoo qof walbaa uu baaskiil watay.
Waan isla sheekaysanay oo waxaan qadarinay muuqaal quruxsan wadada dhinaceeda oo dhan. Waan istaagnay oo sawirro ka qaadnay markaan la kulannay aragtiyo qurux badan. Waxaan nafisnay nafteena oo taleefannadeenna hoos u dhignay, xilligan la joogo waxaan u baahanahay oo keliya inaan si xor ah u fuulno, annagoo sameyneyna wax aan xiiseynayno.
Qiyaastii 2 saacadood kadib, waxaan gaarnay Zhengding South Gate, anagoo sawirro ka qaadanayna sidii xusuus ahaan.
Masaafada dheer ee safarka ka dib, kulligeen waan na wada macaluulnay. Waxay ahayd lagama maarmaan in la helo xoogaa cunno ah oo caan ku ah waxaana loogu magac daray Woodiga Wadada Baasaska ah oo macaan.
Waxay ahayd waqtigii aan aado guriga!